Ra’iisal wasaare Rooble oo maanta tagaya magaalada Baydhabo. | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Ra’iisal wasaare Rooble oo maanta tagaya magaalada Baydhabo.
Ra’iisal wasaare Rooble oo maanta tagaya magaalada Baydhabo.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda FS mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee dawlad goboleedka Koofur galbeed, halkaas oo ay haatanba ka socoto qabanqaabada wafdiga sare ee ku soo wajahan.
Ammaanka magaalada ayaa sare loo qaaday, waxaana ciidamada amnigu ay u sugayaan nabadgalyada magaalada iyo garoonka diyaaradaha si feejigan, waxaana sidoo kale bulshadu u diyaar garoobeen soo dhawaynta wafdiga Ra’iisal wasaaraha.
Socdaalka wafdiga Ra’iisal wasaare Rooble ayaa salka ku haya wadatashi uu halkaasi kula yeelanayo mas’uuliyiinta Koofur galbeed iyo bulshada gobolkaas, kuwaas oo la xiriira arrimaha doorashooyinka, dhammaystirka Dastuurka iyo xoojinta ammaanka deegaanada ay doorashadu ka dhacayso.
Waxaa sidoo kale Ra’iisal wasaaruhu uu dhagaysan doonaa baahiyaha dhinaca bulshada ah ee ka jira deegaanada Koofur galbeed, si hawlqabadka xukuumadda loogudaro inay baahiyahaasi ka jawaabto.
Previous articleWaxaa sii kordhaya walwalka laga qabo badqabka qaxootiga Eritereya Xilli Colaad Itoobiya ay sii kordhayso.
Next articleShirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 ayaa dib u taageeray helitaan caalamiga ah ee ‘loo siman yahay’ ee tallaalka COVID-19.